Ngabe imitha yamandla wezigaba iyahambisana neZwift? - Uzwift
Main > Uzwift > Izigaba zamamitha kagesi zwift - izimpendulo ezilula zemibuzo
Izigaba zamamitha kagesi zwift - izimpendulo ezilula zemibuzo
Ngabe imitha yamandla wezigaba iyahambisana neZwift?
Amandla kaZwiftIsici sokumaketha sikuvumela ukuthi ilawule imodi ye-ERG ngemininingwane evela ku-imitha yamandla. Ukuphela kokufanele ukwenze ukuxhuma kwakho kokubili i-imitha yamandlanomqeqeshi olawulekayo ohlakaniphile lokhoiyahambisana neZwift.
Sawubona, nginguSean Coffey, silapha eSifundweni Sokugibela Amabhayisikili, namuhla sizokhuluma ngeStage Bb sb 20 Smart Bike ngizokukhombisa ukuthi ungayisetha kanjani futhi uyixhume ku-zwift ukuze ukwazi ingaqala ngobuhlakani ngeStage Bike sb20 Bike ine-bluetooth ebili evumela ukuthi uxhume amadivayisi angaphezu kwelilodwa ngesikhathi Ungasebenzisa ilaptop yakho Ungasebenzisa ifoni yakho Namuhla sizosebenzisa ithebhulethi ye-iPad ukuze ube nokuningi izinketho ezahlukahlukene zokuthi ungaxhuma kanjani futhi uzwifting bese ushayela ukuze ubheke i-wautopialet ukuthi into yokuqala okufanele unikeze ibhayisikili lakho lasesiteji imivimbo embalwa yokuvusa evusa imitha yamandla ivusa i-ecu ebhayisikili lesiteji ngakho-ke ibheka kuphela ukuxhumana kwe-bluetooth kuvula i-zwift elandelayo vele udinga ukuthi uxhumane ne-awi-fi ye-zwift uma kungenjalo uma ungashayeli ndawo, lapho nje i-zwift ivula, izokucela ukuxhumana, ngokushesha nje lapho isesha amadivayisi abhanqiwe, chofoza uma chofoza kumthombo wamandla bese i-zwift izofuna okuhlukile b amadivayisi we-luetooth ongaxhuma kuwo, ungabona amadivayisi amabili noma amathathu ahlukene anezinsuku zamagama kulolu hlu, amabili kuzoba uhlangothi lwakho lwesobunxele nemitha yakho yamandla okudla, enye kuzoba isithuthuthu futhi ibizwa ngebhayisikili leSiteji, imvamisa enenombolo enamadijithi amane eceleni kwaso, leli ibhayisikili lasesiteji u-zero-six, ngakho-ke uqhafaza ebhayisikili lesiteji ukuxhuma futhi uxhuma ne-cadence futhi ulawule lesi sinyathelo, ukuze futhi kuthathe amandla kusuka ebhayisikili lesiteji Kucosha i-cadence idatha bese i-zwift nebhayisikili ziyaxoxa ukuze ibhayisikili likwazi ukulingisa amagquma alawulwa yiZwift, uma usuqedile ukusetha, shaya inkinobho yokukhipha futhi usukulungele ukugibela. Ibhayisikili lakho lasesiteji linokuxhuma okuhlanganisiwe kwe-Bluetooth okubili, ngakho-ke ungakwazi futhi ukuxhuma kuhlelo lokusebenza lweStageslink ngenkathi iZwifting ukuthola eminye imisebenzi nolwazi. Vula uhlelo lokusebenza lwe-Stage Link ku-smartphone yakho futhi kufanele ivule ngqo kumphathi wedivayisi, uma kungenjalo Ungathola ikhasi khona lapha ukusuka lapho xhuma kubhayisikili lakho lesiteji Kuthatha imizuzwana embalwa ukusungula ukuxhumana, ngokushesha nje lapho kuxhunyiwe , ubona amandla amanje, isivinini samanje kanye nebhalansi phakathi kwesobunxele nangakwesokudla futhi unenkomba yegiya ukuze ubone ukuthi ukuphi manje kuWatopia enginakho lokhu kusetha ngeRoad Compact Gearing ngakho-ke izinyo elingu-5034 ukumiswa kokuxhunywa ngaphambili okusohlangothini lwesobunxele, bese unamagiya ayi-11 ebangeni elingafika kokungama-28 kepha ungenza ngokwezifiso lokhu kuchofoza lapha futhi ungenza ngezifiso ama-powertrains akho atholakalayo.
Ngemuva kwalokho, uma ungathanda ukufaka ezinye izitimela ezihamba phambili, chofoza igiya phezulu kwesobunxele futhi uzobona ama-Virtual Setups ku-Plus futhi uzothola isikrini esibonisa izilungiselelo ezahlukahlukene ezizokusiza ukulawula ibhayisikili lakho nokulilungisa ngenkathi uZwifting at. Ukusuka lapha unezinketho eziningi nginezilungiselelo ezine lapha uphawu lokuhlanganisa oluvela lapha uthola lesi sikrini esikuvumela ukuthi uchaze ukuxhumeka kwangaphambili. Ungawathola ama-cartridges angemuva futhi uma ungakwazi ukuthola ngqo okufunayo noma ufuna okuthile okungcono kakhulu kunalokho impilo yangempela engakunika khona, chofoza u-Custom bese uya ku-Dreamdrive usuka lapha, ungavele uchaze amagiya angemuva ayi-10 kuye kwangama-50 futhi bese ishifter yangakwesobunxele manje isetha ukuthi mangaki amagiya okweqa ukuze ube nendawo enkulu kakhulu ngaphandle kokugxuma bese futhi ungenza ngezifiso zonke izinkinobho zokushintsha kufaka phakathi inkinobho yakho ye-sprint ukuze ukwazi ukwenza ngendlela oyifisayo ukusebenza kwamagiya wakho wamagiya ukufanisa ibhayisikili lakho langempela noma okuthile ibhayisikili lakho langempela elingakwazi, kukuwe ngokuphelele, ibhayisikili elihlakaniphile i-Stagebike SB 20 lenzelwe ukuletha okuhlangenwe nakho okungokoqobo okucwiliswa kakhulu endlini, noma ngabe ukuZwift noma ezinye izinhlelo zokusebenza ezihambisanayo zomuntu wesithathu esisebenza nazo futhi Njengoba ukwazi ukubona, kunezinketho eziningi zenkambiso lapha, konke kusuka kubude be-alamu yakho yokuphulukisa kuze kufike ekukhetheni kwakho kwamagiya futhi uzothola ukufundwa kwegiya ngenkathi usohambeni ngaphakathi kwe-zwift.
Hlala ubukele izindatshana eziningi zokuthi ungaxhuma kanjani kwezinye izinhlelo zokusebenza kanye nezinye izici ezijulile esizifaka ebhayisikili leSiteji. Siyabonga ngokujoyina nathi
Ngabe imitha yamandla isebenza kanjani?
I-Izigabauhlelo luthembele kugongolo lokugoba olufakwa ku-pod kukhonkolo. Uma uphusha kuma-pedals, i-crank ichezuka ngokwanele ukuze ugongolo lokugoba luthathe ukunyakaza, ama-accelerometer alinganise i-cadence iye ku-30rpm, futhi idatha iguqulwa ibeamandlakuyafundwa.
Amapharamitha anokunye kokuthuthuka okuhle ongakwenza kubhayisikili lakho. Kunengqondo ukusho ukuthi bashintshe uqeqesho lokuhamba ngebhayisikili ngakho-ke kuyaqondakala ukuthi bayadingeka kakhulu, kodwa iqiniso ukuthi zingenye zezinto eziyinkimbinkimbi kakhulu futhi ezingaqondakali ebhayisikili lakho ngakho-ke sicabange ukuthi sizozama ukuchaza ukuthi kanjani amapharamitha ayasebenza. Okokuqala ngiyini amandla engikhuluma ngawo ama-watts angama-200 lapha ama-watts angama-400 lapho, kepha empeleni iyini nje isilinganiso sesilinganiso somsebenzi owenzayo, manje amandla uqobo lwawo aphelele, kepha umphumela usendleleni ngakho isibonelo ijubane ushayela ngokuthanda kuzohluka ngokuya ngezici zangaphandle ezifana ne-gradient oya ekukhuphukeni noma isivunguvungu osilima manje ukuthola amandla owakhiphayo, kudinga i-equation eyodwa elula ukuthi izikhathi eziphoqelekile ibanga elihlukaniswe isikhathi Kulula ukusho, kepha kunzima kakhulu ukukala ngebhayisikili, kepha ukuqonda umqondo manje, uma uwufaka ku-F wona, ungaba lula kakhulu kumongo olandelayo.
Ngakho-ke uma ucabanga ngamandla wokuthi ugwedla kanzima kanjani, nokuthi imvamisa oyishayayo ukuze i-cadence yakho ibe yisikhathi, kufanele uqale ukukuqonda lokhu lapho, ngokwesibonelo, ugibela umqansa ngejubane elimisiwe Ukunyathela ngo-100 RPM kudinga kuphela uhhafu wamandla ongawenza ku-50 RPM, kepha njengoba usebenzisa lawo mandla kaningi kaningi, amandla ahlala enguMkhawulo Wamandla Ngokuvamile uyiphepha nje elincane lensimbi elihambayo eligobile lapho amandla isetshenziswa kuyo, futhi lapho igobeka ukumelana nensimbi inyuka okusho ukuthi empeleni ungayitshela nje ngesekethe kagesi futhi lokho kufanele ukwazi ukuyibala bese kuba kuhle lokhu kuhlelwe ngaphambilini futhi kulula ukukuchaza imigomo yemitha lamandla asuselwa enyovwayo njengoba isikhala sihlobene nobude bemikhonto yakho emihle kuma-pedal d namamitha kagesi asuselwa kugesi ahlobene ne-cadence yakho bese ungakwazi ukukala lokhu kalula ngezibuthe uma kwenzeka okuthile ipharamitha Ama-rs afana nalokhu kwi-accelerometer yangaphakathi kusho ukuthi ungawathola lapho kuqhekeka khona ifektri amapharamitha wakho alinganiswa ukuze kuqinisekiswe ukuthi okukhishwa ku-gauge yesisindo kufana kahle nengxoxo eyiyo, ngendlela, ukulinganiswa empeleni kuyigama lelo kuvame ukusetshenziswa kabi lapha ngoba ukulinganisa okwenzayo kuphiko lwakho oluyinhloko akulona ukulinganisa, kodwa i-zero offset efana nokuthi isikali sakho sasekhishini sifunda uziro ngaphambi kokubeka ukudla kuso uma kunjalo qiniseka ukuthi imitha lakho lamandla lifunda uziro uma ungekho ukugebha ngempela futhi lokhu kungumsebenzi obalulekile kepha ukuthi kufanele ukwenze kangaki lokhu kuncike ohlotsheni lwemitha yamandla onayo, ngokwesibonelo Imvamisa le mitha yamandla ekugcineni iyazenzakalela ngakho-ke sihlangana nobunzima gauge accelerometers manje lapho sibeka khona kahle lapho thina njengabathengi singakhetha khona ukuze ukwazi ukunamathisela kuma-pedals akho ukukala amandla ne-cadence. Ungazifaka ezikhonkwaneni zakho noma ungazibeka lapha kusicabucabu ukuze ulinganise amandla aphakathi kwembobo kanye namaketanga akho ungawabeka nasochungechungeni uqobo lwawo ukuze ukhale noma ungasebenzisa amandla akhishwa iketanga lakho ukushaya owakho Ihabhu liyaphela, ulinganise njengale mpompi yamandla Uma usebenzisa uhlelo olususelwa kwihabhu noma uhlelo olususelwa kwisicabucabu, okudingayo imitha yamandla ukukala, kepha kuma-cranks akho kanye nama-pedals wakho udinga ukukala ngoba anika ukukalwa kwemilenze yakho yangakwesokunxele nangakwesokudla ngokuzimela komunye nomunye, njengalawa maRotor-Twin-Power-Pedals noma amaPower-Tapp1-Pedals, yize amamitha amaningi wamandla atholakala kuphela emakethe yesandla sobunxele, ngakho-ke Ukukhetha okuvamile kithina abathengi, thina ngokukhetha imitha yamandla eshibhile, kepha eyodwa ekala ohlangothini olulodwa futhi kufanele iphindwe kabili leli nani ukugcina ukusebenza kwethu kukonke, empeleni kuthathwa ngokuthi isib
B. Ukudalula u-50% wamandla akho aphelele Yiqiniso, ucabanga ukuthi unyathela ngokulingana nemilenze yakho yangakwesobunxele nangakwesokudla kuthambekele emaphutheni angaba mabi kakhulu ngokuya ngokuthi uqhaqhazela kanjani, kepha kukhona okunye okuhlanganayo, njengoba kunjalo abashayeli abakwazi ukurekhoda i-50-intshi / 50split, ngokwesilinganiso, bazohlala behamba kancane ngomlenze owodwa phezu komunye isikhathi esifushane phakathi nohambo. Ngisho nomthengisi obushelelezi akuyona i-metronome, empeleni, kukhona ucwaningo olukhombisa ukuthi ipharamitha enecala elilodwa ingafinyelela cishe ku-10% ngenkathi kubhalwa, futhi okubi kakhulu, ukuthi bekungeke kuqhubeke ngisho nasempilweni yansuku zonke ngenxa isitayela sakho sokunyathela, ngokwesibonelo siyahluka kuye ngezwe noma empeleni ukukhathala kwakho, kepha kukhona i-caatat lapha, kunjalo, futhi sengivele ngikhulume ngepharamitha eyodwa ngakwesobunxele, imvamisa ishibhile, ngakho-ke kuyindlela enhle thola idatha kwisabelomali esihlobene ngakho-ke ngokusobala zihle kakhulu, okuwukuphela kwento ukuthi kuncike ngqo ekutheni zibaluleke kangakanani izinsuku ezinembile kuwe futhi ngicabanga ukuthi ingakanani imali ogcina unayo lapho-ke kuthiwani nge-software efana ne-strava leyo datha yokusebenza esilinganisweni sakho sejubane kulinganisa ukuthi lokho kunembile kangakanani, ngezinga elithile kungaba isihlobo? olunembile kepha kuya ngezimo ezithile ngoba uzobona ukuthi ukusebenza kwakho empeleni kubalwa yi-algorithm ebheka isisindo sakho, ijubane lakho kanye nomthambeka womgwaqo, onembe kakhulu, kepha, uma ungumthungi noma i-Headwinds ethinta imiphumela ngakho-ke ugibele eqenjini, kufaka phakathi umgwaqo ongemuhle nokukhetha kwakho ibhayisikili ngakho-ke kumnandi ukubheka imininingwane, kepha ungaba nenkinga yokuthola noma yini ewusizo ngaphandle kwezinombolo ezifundwa kahle zedatha, lokhu ngethemba ukuthi ukunikeze ukuqonda kokuthi amamitha wamandla asebenza kanjani, uma unentshisekelo, uma ungenantshisekelo ngisola ngokuqinile ukuthi awuzukuba lapha ukuzobona amazwibela alesi sihloko kepha uzokuthola nonke noma kunjalo ukuthi amandla asebenza kanjani mayelana nokuthi uwasebenzisa kanjani kahle uma unabo bese kuwumqondo omuhle, mane uchofoze lapho bese ubuka ukuqala kwethu nge-athikili yemitha yamandla noma uma uchofoza phansi lapho sinemitha yethu ephezulu yamandla amathiphu i-athikili eku-defin kufanele ukubukeka.
Ngaphandle kwalokho, qiniseka ukuthi ubhalisela i-GCN, ukwenza lokhu, mane uchofoze embulungeni
Ngabe uZwift ulinganisa kanjani amandla?
Indlela enembile kunazo zonke (futhi ebiza kakhulu) ukusebenzisa umqeqeshi ohlakaniphile kanye / nomaamandlaimitha. KephaUZwiftfuthi isekela abaqeqeshi abaningi abangahlakaniphile (i-aka classic noma abayizimungulu) lapho kuhlanganiswa ne-sensor yejubane (idivayisi elula ebala ukujikeleza kwesondo lakho).
i-zwift uhlelo lokusebenza olukuvumela ukuthi uqeqeshe futhi ujahe nezinkulungwane zabantu emhlabeni obonakalayo. Nakhu ukuthi ungaqala kanjani. Okokuqala, ake sihlolisise okokusebenza okudingayo ukuze ukwazi ukuzulazula ezingeni eliyisisekelo olidingayo kubhayisikili nakumqeqeshi okuvumela ukuthi unyathele endaweni emile, uzodinga nedivayisi iRift ekwazisa ngayo ukuthi ukhahlela kanzima kanjani kunezinhlobo ezimbili zabaqeqeshi ongazisebenzisa.
Owokuqala ngumqeqeshi okhaliphile njengalo, unemitha yamandla eyakhelwe ngaphakathi. ukuze ukwazi ukuhumusha ngqo ukuthi ungakanani amandla ocindezela amathebula, i-avatar yakho nayo inenketho yokushintsha ukumelana kuye ngokuthi ukhuphuka noma wehla yini, ikwenza ube nokuhlangenwe nakho okusebenzisana ngempela. Uhlobo lwesibili lomqeqeshi umqeqeshi odidiyelwe manje osekuyindlela eshibhile uma ufuna ukonga imali kepha udinga idivaysi ehlukile ukukhombisa ukuthi ugwedla kanzima kanjani.
Lokhu kungaba inzwa yejubane noma ungaba nesinqe. Uma imitha isivele inamathiselwe kubhayisikili lakho, lokho kungcono kakhulu uma ungafuni ukuthenga umqeqeshi lapho ungasebenzisa ibhayisikili langaphakathi noma iqoqo lama-roller asemhlabeni obonakalayoUdinga futhi nedivayisi esekelwayo ukusebenzisa umdlalo, isib ithebhulethi ye-laptop noma i-smartphone qhubeka futhi ulande iZwiftDala i-akhawunti Yinsizakalo yokubhalisa ongaqala ngayo ngesivivinyo samahhala uma usunakho konke okudingayo masikwenze uzwifting uma usudale i-akhawunti futhi ungene ngemvume, gibela ibhayisikili lakho ngo-10- Imizuzwana engu-15 bese upotoza imilenze yakho ukuvusa izinzwa bese ufuna ukuqhubeka nokuzixhuma ngeBluetooth noma i-Antplus.
Kulokhu, i-Bluetooth ingukuxhumeka okuzinzile, ngakho-ke khetha lokhu uma unaleyo nketho. Sebenzisa umqeqeshi ohlakaniphile, ngakho-ke umthombo wamandla uxhunyiwe futhi ulawuleka ongalawuleka yiwo ovumela i-zwift ukulawula umqeqeshi wakho ohlakaniphile. Uma unomqeqeshi ojwayelekile, udinga ukufaka inzwa yejubane uma une-monitor rate qapha ungangeza futhi ukuthi usukulungele ukuqala iZwift zisuka.
Kubalulekile ukuthi ube ne-intanethi eqinile ezungeze igumbi ngenkathi ushayela ku-Zwift nokuthi ucime futhi ususe izinto ezingabalulekile ze-bluetooth futhi okokugcina, qiniseka ukuthi i-firmware yakho isesikhathini. Lokhu kwenzelwa ukuzivocavoca kwakho okuhlakaniphile, uhlelo lwakho lokusebenza lweZwift, nohlelo lwakho lokusebenza lomngane wakho weZwift. Manje njengoba usunamadivayisi wakho wonke futhi usucishe ukulungele ukukwenza.
Ungenza i-avatar yakho ngendlela oyifisayo ibukeke ifana nawe noma cha, kuye ngokuthi uzizwa kanjani, isikhathi esiningi osichitha ugibela iZwift, amabhayisikili amaningi kanye nezinto ozozivula ukwakha ibhayisikili lakho lamaphupho, vele ufise ukuthi ngabe bekukhona emhlabeni wangempela isinqumo esinzima ukwedlula sonke lapho ugibele ku-zwift ukukhetha ukuthi ufuna ukugibela kuliphi, kuzohlala kunemihlaba emithathu ongakhetha kuyo futhi eyodwa ihlale i-topia inkundla yokudlala enkulu kunazo zonke, ezinye ezimbili izivakashi ezisuselwa ezindaweni zangempela ezifana ILondon neParis futhi lezi ziyashintsha nsuku zonke futhi ungabona kushejuli ezansi kwesokudla kwesikrini ukuthi yimiphi imihlaba yezivakashi etholakalayo uma usukhethe umhlaba ofuna ukuwushayela ku-Click Roots, nalokhu. ikukhombisa imizila eminingi ehlukene kulomhlaba, pheqela phansi umzila futhi ungabona ibanga nokuphakama komzila ngamunye. Amabhayisikili amaningi anikela ngakho konke kusuka emizileni enamagquma ngokweqile kuya ezimpandeni ezijulile, kuya ngohlobo lokugibela othanda ukukwenza noma ukuthi ufuna ukuzikhandla kangakanani uma usuthathe isinqumo. umzila wakho chofoza kulungile bese ubhala bese uzothuthelwa emhlabeni owukhethile. uzolandela ngokuzenzakalela umzila kepha ungathatha noma iliphi ithuba ukuze ukwazi ukulihlola ngokukhululeka uma ufuna ukwengeza isakhiwo esithile ku-Workout yakho ungenza kanjalo ngokwenza ukuzivocavoca ku-zwift chofoza inkinobho yokuzivocavoca eluhlaza okwesibhakabhaka futhi kuzokuthatha ukuzivocavoca okuhlukahlukene okuhlukile khetha okukodwa kuzo uzobe uthola ibha yokwehlisa ukhethe eyodwa bese uzokwethulwa nencazelo yokuqukethwe kokuzivocavoca. i-zwift ilungisa ukusebenza kumamethrikhi wakho wokusebenza afanele, ngokuya nge-FTP yakho.
Uma ungayazi i-FTP yakho, kepha ungakhathazeki, vele upheqa bese ubona ukuthi ukusebenzela kanjani wena. Ngicabanga ukuthi ngizoya. zama izikhathi ezingama-30 zemizuzu ye-ftp namuhla ngemicimbi engiyithandayo engxenye ku-zwift, kunabantu abaningi abagibela ku-zwift ngaso sonke isikhathi, ungaxhuma kuseshini yokuziqeqesha noma umjaho, kunokuthile okugqugquzelayo ngokuzungezwe abanye abantu abaningi futhi neqiniso lokuthi ungabalekela ukunethezeka kwekhaya lakho kuyajabulisa nje futhi kukhona nsuku zonke usuku lonke noma ngabe ukuphi emhlabeni ungajoyina eyodwa emdlalweni Ungabona uhlu ohlangothini lwesokunene lwe isikrini sasekhaya Bheka noma online ku-zwift.com slash imicimbi, kepha kulula kakhulu kuhlelo lokusebenza lweZwift Companionappon, ungabona imicimbi eyahlukahlukene ehambisana nayo yonke imininingwane yomcimbi, kusuka ebangeni lemicimbi kuze kube isikhathi sayo sokuqala, lapho kuyinto yawo wonke umuntu kusuka kumakhilomitha ayi-100 ohambo lweqembu ukuya ecaleni lesikhathi selanga ngokumelene newashi esikrinini sokuqala sohlelo lokusebenza oluhambisanayo Chofoza f Imicimbi engezansi futhi lokhu kuzokuletha ohlwini lwemicimbi esizoqala ukuskrolela phansi kohlu futhi wena ungabona imicimbi eqala kamuva ngalolo suku Qhafaza Emcimbini okwehlisa umcabango wakho, skrolela phansi futhi uzobona eyodwa Izinhlamvu eziseduze ne-ita bcd noma e Isigaba ngasinye sihlukaniswe ngokuya komzimba futhi sikukhombisa ukuthi yimaphi amandla okusinda isilinganiso osidingayo umjaho onzima kunawo wonke onama-watts angu-4.5 iPerkilothis isigaba esinzima kunazo zonke emijahweni elite kuze kube lula kancane bese kuthi c nge-2.5 kuze kufike ku-3.1 watts ngekhilo njalonjalo futhi izinhlanga nemicimbi, okuhle uma ungazizwa sengathi ukugibela lapho uku-zwifty uzohlala ukwazi manje Bheka ama-watts akho ngekhilo, lezi zinombolo zizoshintsha ngaso sonke isikhathi, kepha uma uzama ngakho konke okusemandleni akho ngokulinganayo kufanele bahlale benjalo uma umusha entweni yokuhamba ngebhayisikili futhi wenza umjaho ngingancoma ukuthi uqale esigabeni D noma uma uzethemba impela uma wenza inqubekela phambili enhle ungahlala njalo unyusa isigaba kodwa kuthatha isikhashana uku jwayela ukuthi izinhlanga zisebenza kanjani kepha uma uthola u-d ropped ngoba umjaho? Kunzima kakhulu, ungakhathazeki, kwenzeka kwabangcono kakhulu kithina vele sibuze uConnor kepha izinhlanga ziqala ngokushesha okukhulu ngakho-ke qiniseka ukuthi ufudumele futhi ulungile kepha zehlisa umoya ngesikhathi esithile uma ushayela noma u-Race Then You Are In i-Companion App, uzokwazi ukuxhumana nabashayeli ogijima nabo noma ohamba nabo.
Xoxa nabo, ubanike isibindi, noma ubazise nje ukuthi uyasha namuhla iZwift Power yiwebhusayithi ekuvumela ukuthi ubone yonke imiphumela evela ekhasini lemijaho kanye ne-database esebenza kahle kakhulu kubantu abavela ezinhlangeni. Ngakho-ke uma uthanda idatha qiniseka ukuthi uyayibheka, kufana nokuhlola imiphumela yomjaho wangempela ngakho-ke kuhle kakhulu. Enye into enhle ngeZwift ukuthi ungagibela nabangani, umndeni, futhi usebenzise indlela engcono yokuwathola kuhlelo lokusebenza lomngane, ukuthola uZwifter, faka igama labo bese ukhetha okuthi 'Landela' Lapho sebemukele ocelayo, ngaphandle kokuthi babe nephrofayili yomphakathi ngakho-ke akudingeki bakwemukele.
Ungabamema ukuthi bagibele nawe futhi wakhe i-meetup yakha i-meetup chofoza kusithonjana seqembu elincane kuhlelo lokusebenza oluhambisanayo bese ukhetha okuthi Dala i-Meetup kusuka lapho ungakhetha usuku lomhlaba wakho onomcimbi wakho nokuthi umema bani ukuhlangana kwakho, ungakhetha ukuthi uyafuna yini ukugcina iqembu lihlangene noma ukuthi ufuna ukulijoyina yini. Ungathatha futhi isinqumo sokuthi ngabe ufuna ukubona wonke umuntu emhlabeni obonakalayo noma nje iqembu lakho manje lokho konke okuyizinto zeZwift faka amathiphu ambalwa athe xaxa ekuqinisekiseni ukuthi unebhodlela lamanzi lokuzigcina umuhle futhi unamanzi kuFan eyodwa kanye ithawula ukukugcina umuhle futhi upholile ngakho-ke kumculo omnandi kepha khumbula lapho usuqedile ukuhamba kwakho ungakuvumelanisa nezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene ezinjengeStrava neTeerer Peaks ongabelana ngayo nabangane bakho futhi nomqeqeshi wakho uyazi ukuthi ukuhamba kwakho sekuphelile shiya okunye okuhle izixhumanisi encazelweni engezansi uma ufuna ukufunda kabanzi noma mhlawumbe ujoyine amaqembu athile. Ngiyethemba ukuthi le ndatshana imboze konke odinga ukukwazi mayelana nokuqala ngeZwift.
Uma unemibuzo sicela ubashiye esigabeni sokuphawula ngezansi bese sizozama ukuyiphendula
Ngabe izigaba zamandla emitha zizolilingana yini nebhayisikili lami?
Inqobo nje uma uneiimvume edingekayo phakathieyakhoukuhlala ngengalo nochungechunge (futhi ucabanga ukuthi unezikhala ezihambisanayo ezikhona), kufanele ukwazi ukusebenzisa eyodwa yethuamamitha wamandlavulaibhayisikili lakho.18. 2021.
(amadrama amakhulu) (umculo oqabulayo) - Ukuqeqeshwa kwesisindo sekungenye yezindlela okukhulunywa ngazo kakhulu zokuthuthukisa ukusebenza nokuqina eminyakeni yamuva. Sezadlula izinsuku zokuba ngaphandle, uzihluphe amahora nje unethemba lokuthi uzokuthola okuhle. Okubaluleke ngempela, kepha ukungaguquguquki kwedatha oyithola kumitha yamandla.
Njengoba sithanda ukucabanga ukuthi sinenombolo ephezulu impela, uma inganembile impela, ngeke kukusize ngalutho, akunjalo? Ngenxa yabangane bethu kwaPowerTap, sinezindlela ezimbalwa ezahlukahlukene zokukala amandla ngenkathi usohambeni. Ngakho-ke woza, ake sibheke. Manje-ke, sizokukala kuphi konke lokhu kusebenza? Yebo, sinamadivayisi amahlanu ahlukene esingaxhuma kuwo futhi sibone ukuthi leyo datha inganemba kanjani. (umculo omnandi) Okokuqala yi-PowerTap Rear Hub.
Manje uhlelo lwePowerTap Hub seluneminyaka engaba ngu-20 lukhona. Vele ngalesi sikhathi kutholakale intuthuko ethile nentuthuko, futhi sekukhule kusuka kuyunithi yokuqala enentambo kuya kulokho manje esesikhiqize iyunithi engenazintambo okuyizindaba ezimnandi kuwo wonke umuntu laphaya ongathandi izintambo ezengeziwe emabhayisikili abo, lena yihabhu le-G3 futhi njengoba ubona kuyunithi enkulu yegobolondo yehabhu, empeleni egcina zonke izingqinamba nezinkinga ze-elekthronikhi, bese kuthi i-torque oyifaka esondweni langemuva iguqulwe ibe yileso sikhathi sedatha esithunyelwa iyunithi enkulu. Manje uma uthenga i-impeller eyakhelwe ngaphambili kuyinqubo elula yokufaka.
Kumane nje kuyindaba yokuyifaka ebhayisikili, ukumatanisa neyunithi yakho eyinhloko bese uyahamba, ibhayisikili akudingeki ukuthi libuyiselwe esikhungweni senkonzo lapho ibhethri lishintshwa. Kulula ukukwenza ekhaya ngakho-ke vele uqaqe ukhiye wokugcina bese ushintsha ibhethri, lihle futhi lilula. Manje sengivele ngiyithintile, kepha iyimitha yamandla ephathekayo enhle kakhulu uma unamabhayisikili ambalwa ahlukile, ngakho-ke vele ususe isondo bese ulifaka kwelinye ibhayisikili futhi ulinganiswe namandla alo nalo.
Manje ochwepheshe abaningi bathi uhlelo olususelwa kwihabhu lungenye yezindlela ezinembe kakhulu zokukala ukusebenza ngoba, ngokuyisisekelo, unezinto eziguquguqukayo ezimbalwa ezenzekayo ngakho-ke kunezinto ezimbalwa ezifana nochungechunge oluhambayo nokunye okunjalo. Manje, i-PowerTap uqobo ingitshele ukuthi ihabhu system ingabukela phansi amandla amakhulu kakhulu kwesinye isikhathi, isizathu salokhu, okusobala ukuthi kungenxa yezakhi zedrayivu, unokulahlekelwa okuncane emandleni aluhlaza athunyelwe ngabo. Kodwa-ke, kunembile ukuhlanganisa noma ukukhipha u-1.5%, ngakho-ke unemali efanelekile lapho.
Noma kunjalo. (Umculo okhuthazayo) Yebo, okwesibili, futhi lokhu kuyinto entsha ngokuqhamuka nomdlalo wamamitha kagesi, ngama-pedals. Ngakho-ke i-PowerTap P1 pedals, njengoba ubona, kukhona ibhethri eligcinwe lapha ngaphakathi kwedivayisi, kanye nezilinganisi zokucindezela, ngakho-ke konke kufihlwe kahle ngaphansi kwephedali.
Ekuqaleni babukeka sengathi banevolumu encane, kepha hheyi, uma ubagibela awukuboni lokho vele, akunjalo? Akunandaba. Futhi ngithandani ngempela ngalezi zinyawo? Okokuqala, ziyaphatheka kakhulu, akunjalo? Ngakho-ke uma unebhayisikili elingaphezu kwelilodwa, ungazishintsha kalula ukusuka ebhayisikili uye kwibhayisikili. impela kulula ukwedlula lokho kwekhilikithi, isibonelo.
Futhi uma ubunehabhu esondweni le-jockey, ngokwesibonelo, ubungeke ufune ukukusebenzisa esimweni sokujaha, akunjalo? Futhi-ke sinamabhethri e-AAA, ngakho-ke uma uzithola usesimweni esingesihle futhi ukhohlwe ukubheka ukuthi ibhethri lakho linamandla amangakanani futhi uphelelwa ibhethri, ungahle ube cishe kuzo zonke izitolo kuzo zonke izitaladi emhlabeni Umhlaba unga thola kalula ibhethri le-AAA. Manje idatha isidluliselwa futhi ye-ANT + noma i-Bluetooth. Futhi kuleli cala empeleni sinamacala amabili, ngakho-ke kukhona iPower-Me engakwesobunxele nangakwesokudla, isinyathelo esisodwa sikhuluma nesinye, bese kuthi lesi sisekelo sithumele imininingwane kwiyunithi yekhanda.
Manje kunenketho yokuyisebenzisa njengedivayisi eseceleni futhi, ngakho-ke thenga ama-pedals acishe afane, ngoba, awafani ne-pedal elungile, ayinayo i-electronics ngaphakathi. Esikhundleni salokho, i-pedal yangakwesobunxele ithumela idatha kuyunithi yekhanda, bese ukuthola ukusebenza kwakho kukonke kuphindwe kabili njengoba iningi labantu likhona laphaya lihlukaniswe u-50/50 noma kunjalo noma kunjalo. Manje ekugcineni khuluma ngohlelo lwangempela lwe-cleat olungena lapha.
Ukubukeka kwethu kokuqala, kubukeka kufana kakhulu nokwehla kwe-Look KEO. Banobukhulu obuningi ngokwedlulele, ngakho-ke uma usebenzisa i-Look KEO kuyo ngeke ikunikeze isilinganiso esinembile sokusebenza futhi kungaba yingozi uma ungayinqamula noma uyinamathisele kuyo. Futhi njenge hub system, iku-plus noma kususwe u-1, 5% kunembile. (umculo oqabulayo) Okulandelayo izinhlelo ze-PowerTap C1 zokuxhuma.
Manje, ngokwazi kwami, akukho mncintiswano wangempela wabo emakethe. Zisebenza kanjani Ngakho-ke ziyaphuma ebhokisini njengoba izintambo ezimbili ze-FSA zigxunyekwe kulokho okuyisicabucabu sesibili esinomlingo wemitha yamandla ngaphakathi. Futhi ibuye ibe neyunithi yokudlulisela, okusho ukuthi ukudluliswa nge-transmit futhi i-ANT + noma i-Bluetooth, kanye nebhethri elifakwe ochungechungeni.
Ibuye ingene kuma-crankets ahambisanayo, kuleli cala i-110 BCD, futhi lokho kuyi-crank 5-arm. Futhi ukusebenza kwangempela kukalwa kusuka ngaphandle kochungechunge lwangaphakathi, okuthakazelisa kakhulu kimi noma kunjalo. Kuyathakazelisa ukuthi noma ngabe umqokeleli wedatha empeleni usohlangothini lwesokudla sebhayisikili, empeleni ukukala ibhalansi engakwesokunxele.
Kwenziwa kanjani lokho? “Hhayi-ke, konke lokhu kufinyelela ekwakhekeni kwangempela kochungechunge, ngakho-ke ukukubeka endaweni ehlukile kusicabucabu ngeke kukunikeze ukufundwa okunembile. Manje lokhu empeleni kwenziwa ngokucatshangelwa ukushaywa unyawo lwakho, yingakho kufanele kube sendaweni elungile kusicabucabu. (Umculo ojabulisayo) Ukushaya kwenhliziyo.
Kunjalo, ngathi ukushaya kwenhliziyo. Akukho okuphathelene nokusebenza yize kunjalo, ngoba lokhu empeleni kuyisingeniso kumdlalo wemitha yamandla, ngoba nge-algorithm ehlakaniphile uxhuma leli bhande lokushaya kwenhliziyo ku, ngokwesibonelo, iyunithi lekhanda lakho noma i-smartphone yakho, futhi ikunikeza ngokuyisisekelo isilinganiso sokusebenza kwakho. Akukho lapho kuseduze nezindleko zanoma yini enye mayelana nebhayisikili esilinganisa ukusebenza kwalo, kepha kuyindawo enhle yokungena ukuze uqale ukuqeqeshwa ngamandla.
Futhi izindaba ezimnandi kubantu abangazi kahle ubuchwepheshe uma kukhulunywa ngokushintsha izingcezu zebhayisikili, kunjalo, akudingeki nokuthi ugibele ibhayisikili, akunjalo? Kuhamba nje kukodwa, ngakho-ke ungakwazi ukusithinta sonke isithuthuthu sakho esihlukile. (umculo omnandi) Ekugcineni sinemitha lamandla asuselwa crank. Le evela ezigabeni, futhi njengoba ubona, imigqomo yangempela ye-elekthronikhi yayo ingaphakathi kwekhreyithi yesobunxele.
Ngakho-ke, sinamageji wezintambo nebhethri lomsebenzisi elingashintshwa lapho futhi. Akungezi isisindo esiningi ku-crank yangempela yangempela, futhi empeleni iza ngokuhluka okumbalwa okuhlukile ukufanisa amasethi amaningi wamaketanga atholakala emakethe. Futhi njengawo wonke amanye amamitha wamandla, noma iningi lawo, unebhethri elingashintshwa ngumsebenzisi bese uxhuma nge-ANT + noma nge-Bluetooth.
Sibheke amamitha kagesi amahlanu ahlukene, kepha kufanele sikalwe kanjani futhi siqophe idatha esiyiqoqayo? Yebo, nangu eza kahle, iMission Control noma into efana naleyo. Noma kunjalo, nginezinyunithi ezinhlanu ze-Wahoo ELEMNT BOLT GPS. Ngamunye uhlanganiswe nemitha yamandla.
Ngizohamba ngebhayisikili lami manje. futhi lapho ngibuya ngikwazi ukuhlaziya futhi ngibone ukuthi imitha ngayinye yamandla ihambelana kanjani ngempela. (umculo osebenzayo) Ngakho-ke ake sibheke ukungaguquguquki okubaluleke kakhulu kwedatha erekhodiwe nge-GCN Ingabe Isayensi, futhi ngisebenzisa isoftware yokuhlaziya ye-DC Rainmaker lapha ukuze ubone ukuthi kunemigqa ehlukile kugrafu leyo naleyo naleyo amele amamitha wamandla esiwasebenzisayo.
Ngasohlangothini lwesobunxele kwesikrini, silinganise amandla kuma-watts, futhi lokho kuphansi lapha kuqhathaniswa nesikhathi. Manje lapho nginyakazisa isikhombisi, ngokuyisisekelo ngiyazi ukuthi imitha yamandla ilinganisa ukuthi imaphi amandla ohlangothini olungakwesokudla phezulu, ngakho-ke empeleni singabona imininingwane ezansi iye kwesesibili, enhle kakhulu. Manje usuyabona ukuthi kukhona imitha yamandla engaphakeme kangako njengaleyo esele, kepha ngaphezulu kwalokho ngokuhamba kwesikhathi.
Izindaba ezimnandi ukuthi, ngobukhulu, yonke into isendleleni efanayo njengoba ubona, ngakho-ke imigqa empeleni yi-Sa. Ngilandela okuyizindaba ezimnandi. Manje ake sibheke imigqa emithathu ephezulu kumdwebo wethu.
Ngakho-ke, njengoba ubona, bayalandelana ngokusondelana kakhulu, futhi kwesinye isikhathi ngisho nokubomvana nokuluhlaza, empeleni, kuyisithunzi leso futhi banikeze ukufundwa okufanayo. Ngakho-ke ziyini? Yebo, oluhlaza yi-PowerTap G3, ngakho-ke iyunithi esekwe kwihabhu, nepinki yiPowerTap C1, futhi lokho kuyathandeka impela. Njengoba ngishilo, bayazithwala futhi bazenzele isithunzi kulokhu kukhuphuka naphansi.
Kepha ulayini owolintshi, lawa yizinyawo zePowerTap P1. Futhi uyabona ukuthi zilandela imigqa efanayo ncamashi namanye amamitha wamandla amabili engisanda kuwasho. Kukhona ukuwa okuncane lapha, ngemuva nje kuka-11: 39 ekuseni, futhi ngazi kahle ukuthi bekuyini lokho.
Lapho ngangena phakathi kwezimoto futhi empeleni kwakudingeka nginqamulule esinye sezinyathelo zami ngoba kwakudingeka ngime isikhashana erobhothini ngaphambi kokushayela futhi, ngakho-ke asikho isidingo sokukhathazeka. Imitha yamandla ka-Ee ngisanda kukhuluma ngawo wonke umuntu olinganisa ukukala kwamandla kwesobunxele nangakwesokudla futhi akhombise inani lokukhiphayo. Ngenkathi izigaba okuwumugqa oluhlaza okwesibhakabhaka zikala kuphela ngakwesobunxele bese ziphinda kabili amandla aphelele futhi zikubonise amandla akho aphelele engiwaziyo kusukela ekuweni okungathi sína ebenginakho eminyakeni embalwa edlule ukuthi umlenze wami wesobunxele ubuthakathaka kakhulu kunelungelo lami, ngakho-ke kube yisizathu sokuthi kungani ingafaki amaphuzu aphezulu kangako.
Kepha empeleni kusalandela imigqa efanayo, ngakho-ke sonke silungile lapha. Manje ngolayini omnyama. Ngakho-ke le yiPowerCal, imitha yamandla asuselwa ekushayeni kwenhliziyo.
Manje usuyabona khona manjalo ukuthi isalele emuva ngemuva kweziqongo kanye nemikhombe yamanye amamitha kagesi, okuchaza ukuthi kungani uma njengamanje wenza ukuzivocavoca nge-anaerobic, ukushaya kwenhliziyo yakho kusobala ukuthi akusabeli ngokushesha. Futhi, kulandela imigqa efanayo, ngakho-ke lokho kuyizindaba ezimnandi phela, okwamanje kufanele ngikhulume ukuthi iPowerTap uqobo, ithi, iPowerCal ayiyona i-be-all futhi iqeda konke ukuqeqeshwa kwamandla, isingeniso. Futhi, isilinganiso sami senhliziyo enkulu siphansi kakhulu ngeminyaka yami, kholwa noma ungakholwa, ngakho-ke kungu-174.
Bekulokhu kunjalo selokhu ngaqala ukuzivocavoca kwenhliziyo, kholwa noma ungakukholwa. Kungaleso sizathu-ke izibalo zamandla ami zingaphakeme njengezinye, ngakho-ke kusobala ukuthi usebenzisa ifomula engu-220 kususa iminyaka yakho uma isilinganiso sakho senhliziyo esiphezulu kungokwakho. Kepha izindaba ezinhle, njengoba ngishilo, ngokuvamile zilandela umkhondo ofanayo njengamanye amamitha wamandla laphaya, ngakho-ke awekho ama-dips angamahlaya noma ama-spikes egrafu azokunikeza imiphumela edukisayo ngokuhamba kwesikhathi.
Manje ikhona indawo engcono kakhulu yokubeka imitha yamandla ebhayisikili? Kunokuhlukahluka okumbalwa lapha. Ngakho-ke isabelomali sakho nezinkinga zokuhambisana. Ngakho-ke uma unebhayisikili elilodwa kuphela, mhlawumbe isisombululo esixhunyanisiwe esenzelwe wena ngoba lesi yisimo esisodwa lapho ungafuni ukusishintsha usuke ebhayisikili uye ebhayisikili.
Amabhayisikili ambalwa, mhlawumbe ubheka ama-pedals ukukuhambisa, futhi okufanayo kuya ngebhayisikili futhi. Cabanga nje ngekusasa lapho kukhona ngisho negiya elingaphezulu lokuthenga. Ngakho-ke silapha.
Ngiyaqiniseka ukuthi uzovumelana neminye imiphumela emnandi. Kepha ngifunani ngempela? ukwazi ukuthi, ingabe uziqeqesha ngamandla futhi uma kunjalo, iyiphi indlela oyisebenzisayo? Ngazise kumazwana angezansi womngani oziqeqeshayo eNkathini Ephakathi futhi azishaye amahora. Nokho, ungakhohlwa ukubheka i-GCN Shopat shop.globalcyclingnetwork.com.
Ngingaxhuma imitha yamandla nefoni?
Kokunye, i-Bluetooth ikuvumela ukuthixhumaeyakhoimitha yamandlakohlakaniphileifoni. Lokhu kusho wenaangasebenzisauhlakaniphileifoninjengeyunithi yakho yekhanda (ikhompyutha ehamba ngebhayisikili). Kunezinhlelo zokusebenza eziningi zamahhala ezivela eceleni kuzo zombili i-iOS ne-I-Androidukuthicanisetshenziselwe ukulandelela izinto njengejubane,amandla, i-cadence nokuningi.8 2018.
Kungani amamitha kagesi ebiza kangaka?
Ngobaamamitha wamandlangokusobalangakho-keabasebenzi abasebenza kanzima ukukhiqiza, ayikho inkampani engakha kalula amanani amakhulu angasiza ekunciphiseni izindleko.07/15/2014
Ingabe imitha yamandla ikufanele?
Kusukelaamamitha wamandlasekungabizi, nakanjanikuwufaneleutshalomali. Umqeqeshi omuhle angasebenzisa eyakhoamandlaizinombolo ukuqinisekisa ukuthi ukuqeqeshwa kwakho kuholela ezinhlosweni ezithile.19.09.2019
Ingabe ama-watts ama-300 angamabhayisikili amaningi?
Iningi le-proabagibeli bamabhayisikiliukhiqize cishe ama-200 kuya ku-Ama-watts angama-300ngokwesilinganiso ngesikhathi sesigaba sokuvakasha samahora amane. Umgibeli wokuzilibazisa, ngakolunye uhlangothi, angakwazi ukuxhasa lokhu kuphelaamanzingesikhathi semizuzu engama-45 noma ihora le-spin ekilasini.06.28.2015
Kungani iZwift inzima kangaka?
Umjaho mfushane futhi ushubile ikakhulukazi, uchaze. Kuyimizuzu engama-45-90 yomjaho esikhundleni samahora amathathu kuya kwayisithupha. Umphumela wabagibeli ukuthi alikho ithuba lokonga amandla njengabo emijahweni yemigwaqo,ngakho-kekufanele benze imizamo ethathe isikhathi eside, yokuzikhandla ebacindezela bafinyelele emkhawulweni wabo womzimba.13.05.2020
Iyiphi imitha yamandla ezolingana ibhayisikili lami?
I-Favero Electronics, i-PowerTap, i-Garmin ne-SRM / BHEKA konke kwenza i-pedal-basedamamitha wamandla. Amasistimu asuselwa kunyawo mhlawumbe athandwa kakhuluimitha yamandla. Kulula ukuzenzaukufaka, kulula ukuyisebenzisa,canlinganisa umlenze ozimele ongakwesokunxele nangakwesokudlaamandlafuthi iyahambisana cishe nanoma iyiphiibhayisikili.
IZwift ixhumeka kanjani kubhayisikili lezigaba?
Enye kuzoba yiStageBike. Izobizwa ngeStagesBike, imvamisa enenombolo enamadijithi amane eceleni kwayo. Sincoma ukuxhuma iZwift kumitha yamandla ohlangothini lwesobunxele yamandla ne-cadence, nokuxhuma ku-StagesBike kusimo esilawulekayo.
Ungaqala kanjani kuZwift ngemitha yamandla?
Ukuze uZwift nemitha yakho yamandla “bakhulume” omunye komunye, kufanele ubhangqe nabo ngaphakathi kwesoftware yeZwift. Ukuxhuma imitha lakho lamandla kuZwift kulula impela uma usufake iZwift kudivayisi yakho: Qiniseka ukuthi imitha lakho lamandla linamabhethri amasha. Vula iZwift kudivayisi yakho bese ungena ngemvume. Ku
Ungarekhoda imithombo emibili yamandla ehlukene kuZwift?
IZwift njengamanje ayinalo ikhono lokuqopha imithombo yamandla emibili ehlukene, ngakho abagibeli bazorekhoda umthombo wamandla owodwa kuZwift, bese kuthi okwesibili kukhompyutha yabo yamabhayisikili (iGarmin, Wahoo ELMNT, njll). Ukurekhoda kabili kuthandwa kakhulu phakathi kwama-racers aphezulu we-Zwift ngoba kulungisa inqubo yokuqinisekisa ukusebenza.